Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » T amoron-dranomasina dimy tsy tokony halahelo mandritra ny fialantsasatra any Seychelles
Malaza noho ny hatsaran-tarehy voajanahary sy ny zavamaniry ary ny biby tsy mampino azy, ny morontsiraka izay manana rano manga sy manga mafana Seychelles dia misarika ho azy ireo. Manomboka amin'ny crescent malefaka-vovoka miafina ka hatramin'ny faran'ny lava sy ny kofehy vita amin'ny vouloutier dia manana ny "anse" miafina.
Seychelles dia nosikely any amin'ny Ranomasimbe Indianina misy nosy tsara tarehy mihoatra ny 100 ny anarany.
Maherin'ny 120 ny morontsiraka mahatalanjona azo ankafizina raha mitsidika ity firenena paradisa ity izay feno fifaliana amoron-dranomasina.
Ireto ny tora-pasika 5 ambony izay tokony ho ao amin'ny lisitra fitsidihan'ny mpizahatany rehetra rehefa any Seychelles.
Maherin'ny 120 ny morontsiraka azo isafidianana amin'ireo nosy lehibe telo any Seychelles, ity misy morontsiraka dimy izay tokony ho ao amin'ny lisitry ny fijanonan'ny mpitsidika rehetra.
Toeram-pierena miafina any La Digue, Anse Cocos dia miorina amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy kelin'i Seychelles ary amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana maharitra 30 minitra ihany no ahazoana azy, na amin'ny alàlan'ny làlambe avy any Grand Anse na amin'ny lalana hafa mankany Anse Fourmis. Tsy dia fantatra loatra noho ilay sary Anse Source D'Argent be fakana sary, izay izaran'izy ireo endri-javatra mitovy amin'izany, ny Anse Cocos tsara tarehy dia sarobidy kokoa amin'ny lafiny mitokana, izay manintona ny firazanany rehetra.
Fantatra amin'ny morontsiraka malaza indrindra eto Praslin, Anse Lazio dia matetika no voatanisa amin'ireo amoron-dranomasina folo manerantany. Ireo mpiambina granita efa antitra dia miambina amin'ny faran'ny lafiny roa amin'ny fasika fotsy malefaka mankamin'ny rano madio, mety tsara amin'ny filomanosana sy snorkeling. Ilaina amin'ny lisitry ny mpitsidika rehetra, Anse Lazio dia mijanona hatrany amin'ny fampiononana ary tsy handiso fanantenana.
Malala iray hafa ao Praslin, ilay Anse Georgette faran'izay tsara dia mendrika ny fiakarana mandritra ny 30 minitra amin'ny alàlan'ny tokotanin'ny trano fivarotana Constance Lemuria. Raha tsy izany, sambokely izy io. Raha mahatratra ny Anse Georgette ianao dia azo antoka fa ho resin'ny fasika malemy vovoka feno ravina tropikaly maniry ianao, ary koa ny toerana snorkeling mahatalanjona.
Voalaza fa morontsiraka be mpaka sary indrindra eran'izao tontolo izao, ary azon'ny bisikileta mandeha amin'ny L'Union Estate an'ny La Digue, ity mari-pamantarana tsy manam-paharoa ity dia sarobidy noho ny vatolampy granite goavambe fa ny fasika fotsy malefaka ihany koa ary ny rano mangarahara mazava. Voaro amin'ny haran-dranomasina, ny ranomasina dia milamina tsy misy farany ao amin'ny Anse Source D'Argent, ka mahatonga azy io ho ankafizin'ny fianakaviana sy ny mpivady izay te-hohozongozin'ny onja na hanandrana ny tanany amin'ny snorkeling. Tsy maintsy atao, raha any La Digue ianao!
Matetika nofaritana ho “mahavariana” na “miavaka” mihitsy aza, i Anse Takamaka dia iray amin'ireo morontsiraka mahavariana indrindra an'i Mahé. Any atsimon'i Mahé, Anse Takamaka dia maneho ny morontsiraka tonga lafatra amin'ny carte postales, izay ahatongavan'ny ranomasina dia ny Ranomasimbe Indianina.